हाम्रो झन्डा कति पुरानो , यसको इतिहास जान्नुहुन्छ ? - Saptakoshionline
हाम्रो झन्डा कति पुरानो , यसको इतिहास जान्नुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०६, २०७५ समय: ८:३५:४४
संसारभरि नै एकमात्र त्रिकोणात्मक झन्डा नेपालको छ । यो सनातन धर्म–संस्कृति एवं योग दर्शनमा आधारित छ । यसले नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने सन्देश दिएको छ । यसैले यो स्वतन्त्रताको प्रतीक एवं पर्याय हो । प्राचीन कालदेखि नै यो झन्डाको अस्तित्व रहेको पाइन्छ । लिच्छविकालमा बनेका मन्दिरका द्वारमा यस झन्डाले स्थान पाएको छ।लिच्छविकालमा तामाका विभिन्न किसिमका निकै टकहरू पाइएका छन्। तिनमा ‘श्रीमानांक’ अंकित टक पनि एक हो ।
विभिन्न साइजका ‘श्रीमानांक’ मुद्रा अरुभन्दा केही बढी मात्रामा प्राप्त भएका छन् । तिनमा ध्वजासहित सिंहको मूर्ति अंकित (श्रीमानांक) मुद्रा विशेष उल्लेखनीय छ । यी ‘श्रीमानांक’ मुद्रामा अंकित लिपि चाँगुको स्तम्भ लेखको लिपिसँग ट्वाक्क मिल्ने हुनाले ‘श्रीमानांक’ मुद्रा प्रसिद्ध मानदेवकै हो भन्ने कुरा निश्चित हुने नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको धनबज्र बज्राचार्यको लिच्छविकालमा अभिलेख (२०५३, पृ.८)मा उल्लेख छ ।
(ज्ञवाली र निरौलाको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘गोरक्ष पद्धति’मा संग्रहित आलेखको सम्पादित अंश । सं.)-नागरिकबाट